Ihe nkiri Steve Jobs nwetara ọtụtụ Ndenye aha Golden Globe | Esi m mac
Ihe nkiri Steve Jobs na-enweta Ndenye Ọchịchị Golden Globe
Ihe nkiri kachasị ọhụrụ banyere ndụ Steve Jobs agafeela n’enweghị ụfụ ma ọ bụ otuto site na sinima na ụlọ ihe nkiri ndị America. N'oge na-adịghị anya mgbe e mechara ya, A manyere ụlọ ọrụ na-emepụta ihe iji belata ụlọ ebe ọ na-egosi malite n’ihe dị ka puku abụọ na narị abụọ ruo ihe karịrị narị atọ gbasara ebe niile.
Bọchị izu abụọ ahụ tupu mmalite nke ihe nkiri ahụ, onye na-emepụta ihe kpebiri iji nyochaa ya na ụlọ ihe nkiri na Los Angeles na New York, coihicha ezigbo nyocha na nchịkọta dịka atụmanya si dị, ma ozugbo ọ kụrụ akwụkwọ iwu na mba ahụ, ọ na-atọ ụtọ mgbe a hụrụ ihe nkiri a.
N'oge izu ụka mbụ, lIhe nkiri ahụ gbara nke asaa na nnukwu ego, na-eweta ego nke $ 7,5 nde. Site ebe ahụ, nchịkọta na ọha na eze gbadara na-enweghị brek, ruo mgbe emesịrị wepụ ya na ọtụtụ ụlọ ihe nkiri na mba ahụ. Nkatọ ndị sitere na Apple adịghị mma ma ọlị nke ahụ nwere ike imetụta echiche nke ndị ọrụ Apple.
Vinghapụ ma ọ bụrụ na ihe anyị nwere ike ịhụ na fim ahụ kwekọrọ n'eziokwu ma ọ bụ Aaron Sorkin kwubigara ókè n'akụkụ ụfọdụ nke ọnụ ọgụgụ nke Ọrụ. N'agbanyeghị nchịkọta dị ala, Ihe nkiri a natara nhọpụta Golden Globe atọ a ga-enyefe ya na Jenụwarị 10 na-esote.
N'etiti ndị nomine anyị na-ahụ protagonist Michael Fassbender dị ka Steve Jobs na Kate Winslet. Ma onye na-ede ihe nkiri ahụ bụ Aaron Sorkin anatawokwa nhoputa maka kacha mma ihuenyo. Danny Boyle kwuru ụbọchị ole na ole gara aga na ọ chọrọ ịbanye n'ọsọ ahụ iji tinye aha ndị ọzọ maka Oscars Academy na-esote, na maka ugbu a ịbụ onye a họpụtara maka Golden Globes bụ nzọụkwụ mbụ iji nweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe nkiri Steve Jobs na-enweta Ndenye Ọchịchị Golden Globe
LEGO Onyenwe Mgbaaka, na ere ya obere oge
Mmegide dị na iOS na OS X nwere ike ịbawanye ụba na 2016